Imidlalo yeChiefs kanye neSundowns ihlelwe kabusha ukuze kuvuleke indlela yezinhlelo ze-CAF | Scrolla Izindaba
Imidlalo yeChiefs kanye neSundowns ihlelwe kabusha ukuze kuvuleke indlela yezinhlelo ze-CAF
Ukubandakanya iMamelodi Sundowns kanye neKaizer Chiefs ezinhlelweni ze-CAF Champions League, i-PSL isihlele imidlalo yabo ngempelasonto kanye nangesonto elizayo.
IDowns neChiefs izohambela izindawo zabo ezahlukene ngoLwesihlanu njengoba bezobe besebenza ngeSonto emidlalweni ye-Champions League.
AMasandawana aye e-Tanzania emdlalweni wabo ka-Group B neCR Belouizdad yase-Algeria eBenjamin Mkapa Stadium e-Dar es Salaam ngehora le-3 ntambama. Lo mdlalo ubuhlelelwe umhla zingama-23 kuNhlolanja kodwa wakhanselwa ngenxa yemikhawulo yezokwelapha e-Algeria.
IDowns bekufanele ibhekane nePolokwane City kowe-Nedbank Cup last 16 ngoMgqibelo kodwa i-PSL ikuqinisekisile ukuthi lo mdlalo usuhlelelwe uLwesithathu mhla zi-10 kuNdasa e-Loftus Stadium e-Tshwane ngehora le-3 ntambama.
Ukuya kweSundowns e-Stellenbosch emdlalweni we-DStv Premiership nakho kuhlehlisiwe kanti iligi isazoqinisekisa usuku olusha.
Lo mdlalo bekufanele udlalwe ngoLwesibili oluzayo, ngemuva kwezinsuku ezintathu kuphela umdlalo weDowns e-Tanzania.
Amakhosi abesenkingeni efanayo neyeSundowns maqondana nomdlalo olandelayo weligi. IChiefs ibizoba nomdlalo e-Polokwane ibhekene neTshakhuma Tsha Madzivhandila ngoLwesibili oluzayo kodwa iligi nawo yawuhlehlisa.
NgoLwesihlanu ekuseni Amakhosi azosuka eGoli ngendiza ekhethekile eqashiwe eya e-Burkina Faso lapho ezobhekana khona neqembu lase-Morocco iWydad Casablanca e-Ouagadougou e-4 Agasti Stadium ngehora le-6 ntambama.
Lokhu kungqubuzana kuka-Group C ekuqaleni bekufanele kwenzeke ngoNhlolanja womhla zi-13 e-Casablanca kodwa kwahlehliswa yi-CAF ngemuva kokuthi abase-Morocco bengazange banikeze iChiefs ama-visa.